I-penthouse enelanga enokubukwa okumangalisayo (ngekheshi) - I-Airbnb
I-penthouse enelanga enokubukwa okumangalisayo (ngekheshi)
Ta' Sannat, i-Malta
U-Daniela Ungumbungazi ovelele
✔ Ipenthouse ekhanyayo futhi enelanga engu-160 sqm enezitezi ezizimele ezi-3
✔ Ukubukwa okuhle kwe-360 ° kwesiqhingi
✔ Ikhishi elihlome ngokugcwele
✔ Indawo ye-barbeque nefenisha yangaphandle
✔ Hlanza Ngokungenabala
✔ I-Wifi ye-inthanethi esheshayo
✔ imizuzu emi-5 ukuya ezitobhini zamabhasi/ezitolo nemizuzu eyi-10 ukuya ezindaweni zokucima ukoma/indawo yokudlela
✔ Umtapo wezincwadi we-Amateur-worm
✔ Ukusakazwa kwe-Movie ngamayintshi angama-55 we-TV
✔ Ubaba uGeorge. Uzokuphatha njengabangane futhi akusize uma udinga. Uyindawo yethu eyingqayizivele yokuthengisa
Sicela uzenze usekhaya - silwela ukwenza okusemandleni ethu ukuze ujabulele ukuhlala kwakho. Futhi sivumelana nezimo kakhulu ekungeneni nasekuphumeni futhi siwukushayelwa ucingo uma kunesidingo.
Jabulela izoso noma isiphuzo nabangani ngokubuka okuhle kakhulu kwendlu yasendulo, i-Xewkija dome, kanye namagquma e-Gozo. Funda incwadi (thatha eyethu) noma mane nje uhlale futhi uphumule ngokuthula.
Udinwe ukudla ngaphandle! Asikho isidingo sokukhathazeka njengoba unekhishi elihlome ngokuphelele elifika nemimese ebukhali, ifriji/ifriji, iwasha izitsha, i-microwave, iketela, i-toaster, 4 hob yokushisa, ihhavini ehlelekayo, izitsha eziningi, amapani, izibuko zewayini, ingilazi kabhiya newayini. i-decanter.
Vuka kuleli gumbi lokulala eliphuphile elinombono omuhle wedolobha, njengoba ukukhanya kwasekuseni kungena ngeminyango esuka phansi iye ophahleni njengoba uvula amakhethini afaka mnyama igumbi. Ngena ethafeni bese ubuka imibono ekhangayo ngenkathi ujabulela ikhofi ngaphambi kokuba uhambe uyohlola isiqhingi sethu esihle.
Igumbi lokulala eliyisipele
Jabulela ingilazi yewayini kuvulandi wesitayela sikaJuliet ngaphambi kokuya ebusuku okuphumula.
Ugesi usetshenziswa imitha yemali (amakhredithi anele okuhlala ngokunethezekile azohlinzekwa mahhala kodwa okudlulele kudingeka kukhokhwe). Okunye okutholakalayo wumshini wokuwasha osendaweni.
Uma uhamba ngebhayisikili uzungeza isiqhingi sethu esihle, sihlinzeka ngendawo ephephile lapho ungagcina khona ibhayisikili lakho ubusuku bonke.
Idolobhana elithulile laseSannat liseningizimu yesiqhingi saseGozo futhi ligqame kakhulu ngamawa e-Ta’ Cenc ahlala izilwane zasendle eziningi, izinqola zasendulo ezingaqondakali, izilwane ezicebile nezitshalo. Amawa aseTa’ Cenc angamawa aphakeme kakhulu esiqhingini saseGozo.
Idolobhana laziwa kakhulu ngezigodi eziluhlaza okotshani okuhlanganisa nesigodi saseHanzira, isigodi semvelo esihlukanisa iSannat nedolobhana laseXewkija. Lesi sigodi sikuholela e-Mgarr ix-Xini Bay, itheku elincane, kodwa elihle kakhulu elibekwe phakathi komfula kanye nesigodi semvelo esimaceleni. I-Mgarr ix-Xini ingelinye lamabhishi acashile e-Gozo enhle futhi ngenxa yalokho inikeza ukuzola nokubukwa okuhle kuzo zonke izivakashi zakhona. I-Mgarr ix-Xini inebhishi eliyitshe elincane futhi lizungezwe amatshe amabi naphakeme ezinhlangothini zombili zetheku. Amanzi acwebile ase-Mgarr ix-Xini alungele ukudlala i-snorkeling ne-diving, kanye nokugibela amatshe kuleli theku elipholile nelihle. Amanzi acwebile, imigede kanye nempilo ecebile ye-aquamarine nakho kwenza i-Mgarr ix-Xini ibe enye yezindawo ezihamba phambili e-Gozo zokuthwebula izithombe ngaphansi kwamanzi.
Silapha ngenxa yakho ngesikhathi uhlala, kodwa izinga lethu lokusebenzisana likuwe. Sisekude nocingo noma umlayezo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Ta' Sannat namaphethelo